"Fahatezerana mafy sy fankahalana miharihary": Nofoanan'i Trump ny fihaonana tamin'i Kim Jong-un
Home » Ny olona ao amin'ny Travel & fizahan-tany » "Fahatezerana mafy sy fankahalana miharihary": Nofoanan'i Trump ny fihaonana tamin'i Kim Jong-un
Enga anie 24, 2018
Ny filoha amerikana Donald Trump dia nanafoana ny fihaonana an-tampony nandrasana tamin'ny filoha Koreana Tavaratra Kim Jong-un, "mifototra amin'ny fahatezerana mafy sy ny fankahalana malalaka" avy amin'i Kim, izay nandrahona an'i Etazonia tamin'ny "ady nokleary hatramin'ny niokleary."
“Tena nanantena ny ho any aminareo aho. Mampalahelo fa mifototra amin'ny fahatezerana mafy sy fankahalana miharihary izay naseho tamin'ny fanambarana farany nataonao, mahatsapa aho fa tsy mety, amin'izao fotoana izao, ny hanaovana io fivoriana kasaina efa nokasaina io, ”hoy ny namaky ilay taratasy, nandefa ora vitsivitsy taorian'ny nanapoahan'i Korea Avaratra ny toerana fitiliana nuke ao Punggye-ri. Ny fandravana dia nanatri-maso ny mpanao gazety vahiny vitsivitsy, ary noheverina ho fihetsika tsara sitra-po avy amin'i Kim mialoha ny fihaonana an-tampony kasaina hatao.
Tao amin'ny taratasiny, nitomany i Trump noho ny fahaverezan'ny fotoana nanan-tantara, saingy nisaotra an'i Kim izy tamin'ny famotsorana ireo Amerikanina telo takalon'aina, izay nolazainy fa “fihetsika mahafinaritra”.
Ny praiminisitra lefitra Koreana Avaratra Choe Son-hui dia nilaza ny alakamisy teo fa handeha hiala ny tampon'ny tampony ny fireneny, izay tokony hatao any Singapore ny 12 jona, raha toa ka manohy manao ny "fihetsika tsy ara-dalàna sy maharikoriko" i Washington.
"Na hitsena antsika any amin'ny efitrano fivoriana i Etazonia na hihaona amintsika amin'ny fizarana nokleary-amin'ny-nokleary dia miankina tanteraka amin'ny fanapahan-kevitra sy ny fitondran-tenan'i Etazonia," hoy i Choe.
Ny 'fihetsika tsy ara-dalàna' noresahin'i Choe dia manondro fanazaran-tena ataon'ny tafika amerikana sy Korea atsimo tamin'ny fiandohan'ity volana ity. Ireo avaratra dia nihevitra ireo fihorakorahana fanao isan-taona ireo ho toy ny fihantsiana fanahy iniana sy fanao mandritra ny fanafihana.
Choe koa dia nanokana ny filoha lefitra Mike Pence, izay nilaza tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity fa mety hiafara any Libya i Korea Avaratra raha tsy nanao fifanarahana i Kim. Ny fampitahana an'i Libya dia nataon'ny mpanolotsaina nasionalin'ny fiarovana an'i Trump John Bolton, izay nanolo-kevitra fa ny fanarahan-dalàna an'i Korea Avaratra dia afaka manaraka ny "maodelin'i Libya."
Taorian'ireto fanambarana ireto dia nanafoana ny fifampiresahana tamin'ny South Korea tany Korea Avaratra tamin'ny volana Mey, fa tsy ny fihaonan'ny Singapore niaraka tamin'i Trump. Hatramin'izay dia efa niresaka momba ny zava-nitranga nandritra ny fihaonana an-tampony isan'andro tamin'ny haino aman-jery ny filoha amerikana izay manjavozavo ny amin'ny vinavinany.
Ankehitriny Trump, izay niantso an'i Kim hoe 'lehilahy roketa', ary ny mpitarika Korea Avaratra dia toa niverina tamin'ny fandrahonana.
"Miresaka momba ny fahaizanao nokleary ianao, saingy goavana sy mahery ny anay ka mivavaka amin'Andriamanitra aho fa tsy hampiasaina velively," hoy i Trump tao amin'ilay taratasy.
Ary farany, nanolo-kevitra i Trump fa mety indray andro any, mety ho mpinamana ireo mpitarika roa ireo.
“Raha miova hevitra ianao… aza misalasala miantso ahy na manoratra,” hoy ilay taratasy.